Xasan Sheekh oo si aan caadi ahayn weerar afka ah ku qaaday 4 musharax oo caan ah (DAAWO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xasan Sheekh oo si aan caadi ahayn weerar afka ah ku qaaday 4 musharax oo caan ah (DAAWO)
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si aan hore loo arag weerar afka ah ku qaaday 4 musharax oo ka mid ah musharixiinta haatan isaga kula tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadkii dalkaan madaxda kasoo ahaa ay galeen laba khalad oo aad u waaweyn, islamarkaana ay haatan kusoo dhiiradeen inay dalka markale taladiisa qabtaan.
Wuxuu Xasan Sheekh sheegay in dadkaasi ay sahladeen mas’uuliyadii loo dhiibay, waxayna fariintaas u muuqatay inay si toos ah ugu socotay Shariif Sheekh Axmed oo hore u sheegay inuu waxba kala socon heshiiskii Badda ay Soomaaliya la gashay Kenya, xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka.
“Waxaan nasiib darro ah kuwa aan ka hadlayay ee na-dayacay shalay oo si kheyrul mas’uulinimo u sahladeen inay Baddeena baxdo iyo kuwa danno gaar ah ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay inay xukunka dalka qabtaan, qof kasta oo Soomaali ah oo caqli leh islamarkaana dadnimo ay ku jiro waa garan karaa waxa ka dhalan kara marka ay taladda qabtaan dadkaasi iyo waxay u horseedi karaan dalkaan” Sidaasi waxaa yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Dadka waxaa kaloo ka mid ah kuwo Soomaalidu ku kalsoonaato oo xil u dhiibatay ee meel cidlo ah uga cararay, isagoo ku ku mar-marsiyoonaya (Gaal Hebel iyo Dal Hebel) ayaa i diiday awgeed xilkii intii dhulka dhigay ka cararay, iyagoo shacabka jidadka u taagan yihiin; ma qof cusub ayuu qofkaasi soo noqday?
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinaca kale ka hadlay go’aankii shalay maxkamadda caalamiga ICJ ay kasoo saartay dacwada Badda ee u dhaxeeysa Soomaaliya iyo Kenya, ayaa sheegay inuu aad usoo dhaweeynayo islamarkaana uusan marnaba ka tanaasuli doonin in la dhacdo hantida shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u diyaar garoobaan islamarkaana muujiyaan midnimo, ayna difaacdaan Baddooda oo ay Kenya damacsan tahay inay si xoog ah ku boobto.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee uu ku weeraro qaar ka mid ah musharixiinta ee isaga haatan kula tartameeyso doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana doorashadaasi la filayaa inay dhacdo 8-da bishaan Febraayo ee 2017-ka.